Izinja zasendlini (Canis familiaris) zingabangela umonakalo omkhulu emapulazini emfuyo. Abanye abantu bacabanga ukuthi yizinja ezilambele kuphela ezidala ukulimala, kodwa empeleni ngokuvamile ziyizilwane ezifuywayo ezifuywayo kahle, ezincane nezinkulu, ezihamba ngokubulala. Izinja zingaba yizinto ezivela emgwaqweni okhethekile kuJack Russel noma eBoerboel futhi ukubhujiswa kuvame ukonakala xa besebenza emaphaketheni.
Izinja zingakwazi ukuhamba amakhilomitha ukuyobamba izilwane futhi zihlwanyele ukubhujiswa. Abantu abaningi abavame ukungazi ukuthi izinja zabo azikho okuhle. Ngisho naseKapa kuye kwaba nemibiko yezinja ezakha amaphakethe nokuhlwanyela ukubhujiswa eTable Mountain ngenkathi abanikazi babo bengasekho emsebenzini. Kuyinkinga ikakhulukazi uma amapulazi eseduze nezindawo zokuhlala.
Inja yizilwane ezinonya kakhulu. Baqhaqha futhi balume inyamazane yabo ngokungahleliwe, kungekho ndlela ehleliwe. Kuzoba khona amathrekhi amaningi, njengoba izinja zifuna ukuxosha nokuluma inyamazane yazo ngenkathi zigijima eceleni kwazo. Amawundlu amancane avame ukulunywa esifubeni, emuva noma ikhanda, kuyilapho amawundlu amakhulu noma izimvu zilunywa noma kuphi emzimbeni. Ukubanjwa kungabonakala nakwezintambo, ikhanda, izindlebe, intamo noma izinhlangothi zomdla.
Ngokuvamile ukubulala kungabonakali - kuhlanzekile futhi kuhlanzekile njengokwenyama yemvelo - kanti isidumbu sivame ukudonsa. Umonakalo futhi uvame ukubanzi, kanti izilwane eziningana zikhubazekile noma zibulewe.
Iminyango ivame ukudideka neyomuthi, kepha ingxenye yangemuva yezinyawo ayikho imifantu efana ne-W ngokuvamile yomndeni wekati.
Inani lenyama lidliwayo lihlukahluka, kusukela kunanoma yikuphi okunye okunengi. Ukondla kuvame ukuvela ekupheleni kwesiphambano, lapho izicucu ezinkulu zikhuphuka ezidumbu. Amathambo amakhulu ayohlolwa noma kudliwe futhi izingcezu zoboya zingahlakazeka yonke indawo. Izingcezu ezinkulu zesikhumba nazo zingase ziqothulwe ezilwaneni.
Ucingo kagesi yisilinganiso esihle sokuvimbela izinja. Uma izilwane zifakwa ekraal noma emakamelweni, uma kwenzeka izinkukhu, kufanele kuthathwe ukunakekelwa okukhethekile ukuqinisekisa ukuthi izinja azikwazi ukungena ngokuhamba noma ngaphansi kocingo.
Uma kunenkinga, kungcono ukubandakanya iNhlangano Yezokuvimbela Ukuphathwa Kwezilwane (SPCA). Izinja zepulazi kufanele zifakwe ebusuku, zifakwe ngokufanele futhi zingavunyelwe ukuzulazula zingavunyelwe ukuba zivimbele ukuba zingabi inkinga.
Izinja ezilahlekile zingabanjwa ngezicupho zezinyoni. Umlimi unelungelo elingokomthetho lokudubula inja epulazini lakhe ukuze avikele imfuyo yakhe.